Adoolessa 05, 2016
Filannoon kun wagoota 26 keessatti yeroo jalqabaaf Itiyoopiyaan gola naga eegumsaa keessaa bakka argachuu ishee mul’isa. Itiyoopiyaan erga bara 1945 qabee yeroo lama barcuma sana kan argattee si’a ta’u amma Bolivia, Kazakhstan fi Swedinitti dabalamuu dhaan Amajjii 1 bara 2017 barcuma sana qabachuuf jiru.
Waggoota lamaaf gola naga eegumsaa keessaa bakka argachuun gochaa gaarii hojjetameef badhaasa kenname utuu hin ta’in badhaasa politiikaa ti jedhan Human Rights watchitti itti aanaa dicertora kan ta’an Akshaya Kumar. Nuti akka qabsaa’ota mirga namaatti kan nuti yeroo tokko tokko arginu, jechoota mootummaan kun yeroo filannoo fayyadamuu fi akka miseensa gola naga eegumsaatti waan isaan waadaa seenan carraa filannoo kanaatti fayyadamnee akka irratti fuuleffatamu gochuu barbaanna jedhan.
Ministeerri dhimma alaa Itiyoopiyaa Tedroos Adhanom akka jedhanitti filannoon kun kan agarsisu biyattiin addunyaa biraa kabajaa fi amantaa qabaachuu ishee ti.
Shorokeessummaatti duuluuf dhimmootii koolu galtummaatti qiyyaafata kennuun kan Itiyooopiyaan durasa knnituuf keessaa ti jedhan.
Jalqaba baatii darbee gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch dhiittaa mirga namaa walii galaa kan biyyattii keessaa kan ibsu gabaasa bal’aa baasuun ni yaadatama.
Akka gabaasa sanaatti hiriirtonni mormii 400 ol kanneen naannoo Oromiyaa keessaa humnootii naga eegumsaa Itiyoopiyaan ajjeefamuu fi kanneen kurna kumaan laka’aman erga mormiin sun eegale bara 2015 qabee hdihaa keessa jiraachuu ibse..
Mootummaanis haala mormii Sanaa gad xiqqeessee himuu dhaan akkasuams tarkaanfiin humnaa fudhatame xiqqoo ta’uu ibsee, humnootiin mootummaa hookkara ka’e qabbaneessuuf deebii kennan jedhe. HRW garuu itti dhiyeenyaan hordofuu dhaan hiriirri mormii sun kan nagaa ta’uu qorannaalee baatilee saddeettan darbe geggeessee ba’ii argateen beeksisee jira. Gabaasa sana namoota miidhaan irra ga’e 125, kanneen ijaan arganii fi angawoota mootummaa dubbisuun dhiyeesse.
Human rights Watch yaadi Itiyoopiyaan kennite kun hoogganaa haaraan biyyattii waltajjii tokkummaa mootummootaatti ennaa ba’an kanatti biyya isaanii keessatti mrigi namaa eegamuuf tarkaanfiin attamii akka fudhatamuu mirkaneeffachuuf kan hojjetu ta’uu beeksise.
Wal-dhibdee Waa’ee Ijaarsa Manneen Jireenyaa Irraa Jiraattotaa fi Humnoota Mootummaa Gidduutti Walitti-bu’insa Uumameen Lubbuun Namaa Dhabame
OCHA: Lakkoofsi Namoota Gargaarsa Atattamaa Barbaadanii Faaran Dabalaa Dhufeera
Gaazexeessitotii Afrikaa Kibbaa mootummaan hujii gaazexeessitotaa keessa seenuu haa dhaabuu jedhanii hiriira bahan
Giddu-galli Odeeffannoo Eedsii Dhabbatni Misoomaa Sadarkaa Addunyaa Ameerikaa (USAID) Harkaa Gara Mootummaatti Darbe
Magaalaa Finfinnee, aanaa Laaftoo Keessatti Manni Jireenyaa Nu Irraa Diigamaa Jira, Jedhu Jiraattonni
Walitti-bu’insa Harargee Bahaa, Magaalaa Awwadaay Keessaa Ka’een Namoota Ja’a tu Ajjeesame, Jedhu Jiraattonni. Hospitaalli Immoo Du’a Namoota Afurii Mirkaneesse
Gumii Mirga Dhala Namaa: 'Itoophiyaan heera biyyatii, akkasumaas waliigalteewwan akka addunyaatti mallatteesite cabsaa jirti'
Ajjeechaan lammile biyyattiirratti dhaqqabaa jiru ha dhaabbatu jechaan ogeessonni seeraa Keeniyaatti hiriira mormii gaggeessan
Ayyaana Walabummaa Yunaayitid Isteets Waggaa 240ffaa
Bokkaan Adaamaatti roobe manneen 600 tahan irra faca’e, jiraattotii ammoo karoorii magaalaa tanaaf ba'e lolaa irraa hin dhowwuu jedhan
Guddinni dinagdee Itiyoopiya akkuma tilmaamame ta’e: Muummicha Ministeera Itiyoopiyaa